Madxaweynihii hore ee Puntland Gen. Cadde Muuse iyo ciidamo la socda oo gaaray Qardho
Qardho:-Waxaa shalay gelinkii danbe soo gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar Madxaweynihii hore ee dowllada Puntland Gen. Maxamuud Muuse Xirsi Boqor Cadde Muuse iyo ciidamo la socda ,Gen Cadde Muuse ayaa shalay si deg deg ah uga soo ambabaxay magaalada Boosaaso isagoo ay la socdaan cutub ka tirsan ciidanka Daraawiishta ee Puntlland.
Madxaweynihii hore ee dowllada Puntland Gen. Maxamuud Muuse Xirsi Boqor ayaa waxaa kale oo socdaalkiisa ku weheliyey , Agaasimaha guud ee Macdanta iyo Shidaalka dowllada Puntland Ciise Maxamuud Dhoolawaa ,waxgarad , culimo iyo aqoon yahano ka soo raacay magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Madxaweynihii hore ee dowllada Puntland Gen. Maxamuud Muuse Xirsi Boqor ayaa looga fadhiyaa in uu wax ka qabto dabley hubeysan oo shalay aano qabiil ku dilay ilaa 5 qof oo ay isku hayb yihin taliyihii saldhiga magaalada Qardho oo lagu magacaabi jiray Muse Dhuqub oo koox burcad ah ku laayey jid gooyo ay dhigteen inta u dhexeysa Qardho iyo Garoowe.
Dhinaca kale Ciidamo uu horkacayo Wasiirka amniga dowllada Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan ayaa iyagana la filayaa in maanta soo gaaro magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxaan ay kulamo la qaadan doonaa waxgaradka iyo odayaasha magaalada Qardho iyadoo laga arrinsan doono siddii loo soo gacan gelin lahaa dhalinyaro shalay dil ugu geystay ilaa 5 qof magaalad Qardho kuwaas oo la hayb garanayo.
Culimo,udiinka ku sugan magaalada Qardho iyo Odayaasha iyo waxgaradka ayaa ku jira dadaal xooggan oo ay ku xakamay nayaan in dhibaato kale dhacdo iyagoo arrinkaas ilaa xad lagu guulaystay, Isimada iyo culimada ku nool Puntlland ayaa iyagu ah kuwa inta badan ka taliya samaha haddii ay colaad dhacdana u guntada in ay beelaha dagaalama ay nabadeeyaan.